Forex Educational eBooks - Dhaunirodha Free Forex Trading eBook
Download Free eBook Forex eBook
Bhuku rakazara reEbook eBooks rakapiwa neFXCC. Inofungidzirwa senzvimbo inonyanya kuzivikanwa pakudzidzisa kwemashoko iyo yakakodzera kune vatengesi vose pasinei nehuwandu hwavo hwechiitiko.
Bhuku rimwe nerimwe eBook ibhuku rakakwana rinokubatsira kunzwisisa mazano ekutengeserana makuru uye kugadzira Forex trading strategy yakagadzirirwa zvinangwa zvako pachako. FXCC sechikamu chepurogiramu yaro yekudzidzisa, inopa eBook imwe neimwe MAHARIDZO.
Nzira yekutengesa yakarurama yekufananidza upenyu hwako BEDZA BOOK VERENGA ZVAKAWANDA
Iyi eBook inotarisa pakaputsa nhema yekufananidza unhu hwako nekutengesa. Nokushandisa maitiro chaiwo akaedzwa uye akaongororwa, mazano akaitwa ekuti ungaita sei kuti kutengesa kwako kuenzanisire sarudzo yakasarudzwa uye kuti ingagadzirisa sei pfungwa yako kuitira kuti iite.
Vatengesi Mindset BEDZA BOOK VERENGA ZVAKAWANDA
Chii chinonyanya kukosha pakutengeserana Forex ndekuita kuti manzwiro ako ave pasi pesimba. Iyi eBook inotsvaga kutsanangura matanho ekuti ungasvika sei mupfungwa yepfungwa apo munhu anogona kubvisa zvisarudzo zvepfungwa zvinogona kutungamirira kune zvekutengesa kurasikirwa uye anotsanangura pfungwa dzinofanira kuteverwa kuitira kukudziridza hurongwa hwakanaka hwekutengesa.
mari Management BEDZA BOOK VERENGA ZVAKAWANDA
Iyi eBook inotsanangura kukosha kwekugadzirisa kutarisira mari sechidimbu chechirongwa chebhizimisi. Mienzaniso yakagadzirwa nemigumisiro nemigumisiro yekutonga kwakanaka uye kwakashata kwekuchengetedza ngozi, pamwe nekuregerera kunogona kuchengetedza konhamba yekutengesa uye kuchengetedza kurasikirwa.
Yakananga Nokushandura BEDZA BOOK VERENGA ZVAKAWANDA
Iko yekutengesa forex market yakashandura pamusoro pemakore achangobva kupfuura uye marudzi akawanda emabhengi akabuda. Iyi eBook inotarisa pane STP -Straight Through Processing uye zvinyorwa zvemuenzaniso wevatengi.
Nzira Yokuvaka Nayo Kukunda Kwebasa Rokudyidzana BEDZA BOOK VERENGA ZVAKAWANDA
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha zvekutengeserana chiri kugadzira dombo rakasimba rebhizimisi rerongwa, apo nheyo dzomumwe munhu kubudirira uye kubudirira dzichavakwa. Chero zvatinotarisana nazvo, uye zvisinei nokuti tinotsanangura unyanzvi uye mano, pasina hurongwa hwokutengesa kurondedzera uye kugara, tiri kungoridza muridzo murima uye tichitora maitiro, zvidzidzo zvisingadzidzisi.
Tsika neKubvunzurudza Kunokosha BEDZA BOOK VERENGA ZVAKAWANDA
Kuve wakanyatsogadzirisa pamusika kuongororwa kunowanikwa nevatengesi vari voga vane ruzivo rwekufunga nekuzvitsaurira kune vavariro dzavo dzekutengesa. Bhuku iri rakapfupiswa zvishoma nezvezvinhu zvakasiyana-siyana zvekutengeserana kwekodzero uye yekambani.
Kushandisa Stop Orders BEDZA BOOK VERENGA ZVAKAWANDA
IFX misika inowanzova nekufamba kusingatarisirwi uye imwe inoda kuva nehutano hwakanaka munzvimbo kuitira kuti kudzivisa kukwanisa kwebasa rimwe chete kutungamirire kuparadza ruzivo rwavo rwekutengesa. Dzidza nzira yekugadzirisa nekutarisa kurasikirwa kwako kuburikidza nekushanda kwekushandisa kwemirairo yekumira.
Sangano Rako Rekutengesa BEDZA BOOK VERENGA ZVAKAWANDA
Chirongwa chako chekutengesa chinoumba chikamu chekutengesa kwako basa, rinofanira kunge rine zvinhu zvakakosha zvinotsigira maitiro ako ekutengesa uye zvinangwa. Chirongwa hachifaniri kuva chirongwa chakaoma kwazvo pakutanga. Dzidza kuti ungagadzira sei hurongwa hwako hwokutengesa.
Nhanho yeBasics of Price Action Trading BEDZA BOOK VERENGA ZVAKAWANDA
Chikonzero chinonyanya kukoshesa vatengesi vane ruzivo vachatsigira kupurisa kwePA, ndeyekuti vanoona mutengo semuenzaniso mumwe chete, chiratidzo chinonyanya kukosha, pamataiti avo uye nguva dzakagadzirirwa. Vanotarisa mutengo uye chiito chemutengo chinowedzera sechigumisiro, sechiratidzo chinotungamirira, kwete chiratidzo chekuisa.
Kuchengeta seShamba Rokutengesa BEDZA BOOK VERENGA ZVAKAWANDA
Scalping inzira yakaipa uye isina kunzwisisika yekutengesa. Vakawanda vatengesi vasina ruzivo vanochiverenga sevari kuedza kubhengha pipu zvishoma, kubudirira kwenguva pfupi. Kunyange zvakadaro, uku ndiko kukanganisa kwechivako chekuona sechiitiko uye kunoratidza kuti tsanangudzo yacho yakashandurwa sei munguva, kunyanya panguva yekuvandudzwa kwekutengeserana kwetaneti.
Zuva rekutengesa sekutengeserana BEDZA BOOK VERENGA ZVAKAWANDA
Sokutengeserana uye nzira yekutengesa, zuva rekutengesa nderimwe yemhando dzakakurumbira dzekutengesa uye zvichida mararamiro ekutengesa iyo vazhinji vevatengesi vanotengesa vanotarisira kuti pakupedzisira vapindire, kana kuenda kune imwe, kana (kana kana) vanogona kuchinja basa ravo uye pakupedzisira vanozvitsaurira pachavo nguva yakazara, kumabasa uye kumhizha.